Toliara : Sambo mitondra vary 12 075 taonina tsy tafiditra seranana noho ny fifanolanana
jeudi, 14 janvier 2021 12:58
Mihitsoka ny varin'ny be vola. Fifanolana eo amin’ny tompon’ny sambo (armateur) sy ny mpanera (consignataire) no tsy mahatafiditra an-tseranana ny sambo Panameana “SALLIZAR FORTE” mitondra vary 12 075 taonina tokony hampidinina ao Toliara.
Avy nanatitra vary 12 000 taonina tao Toamasina io sambo io no niazo an’i Toliara. Efa hatramin’ny 06 janoary 2021 no miandry fotsiny eny afovoan-dranomasina, saingy mihitsoka noho io fifanolanana amin’ny tompon’ilay sambo sy ny mpanofa azy io.
Ny orinasa OCEAN INTERPRISE no tompon’ny vary. Karana, mpandraharaha, ao Toliara kosa no tokony handray ilay vary 12 075 taonina. Araka ny loharanom-baovao, dia tsy misy idiran’ireto farany ny tsy iantsonan’ilay sambo ao amin’ny seranana.
Contrat Loon Inc - Aviation Civile de Madagascar »